'ဂီတသက်တမ်း နှစ် ၂ဝ ပြည့်ချိန် နောက် ၆ နှစ်အကြာမှာ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်း အပုဒ် ၁ဝဝ ရှိချင်? - Yangon Media Group
ဂီတသက်တမ်း ၁၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ တေးသံရှင် ဖြူဖြူကျော်သိန်းက သက်တမ်း နှစ်၂ဝ ပြည့်ချိန် နောက် ၆ နှစ်အကြာမှာ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းအပုဒ် ၁ဝဝ ရှိချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ”ဖြူဖြူ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အဆိုတော်သက်တမ်း အခုကတော့ ၁၄ နှစ်နောက် အဆိုတော်သက်တမ်းနှစ် ၂ဝ ပြည့် နောက် ၆ နှစ် ကြာရင် ဖြူဖြူ့မှာကိုယ်ပိုင်သံစဉ်အပုဒ်ရေအခု ၆ဝ ဆိုရင် နောက် ၆ နှစ်အတွင်း အပုဒ် ၁ဝဝ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဖြူဖြူအဆိုတော်သက်တမ်း ၁၄ နှစ်အတွင်းမှာ သီချင်းပေါင်း အပုဒ်ရေ ၁၅ဝ ကျော်ထဲမှာမှ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းက ၆ဝ လောက် ရှိပါတယ်။ နောက်အပုဒ် ၄ဝ လောက် ထပ်လုပ်ချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဖြူဖြူ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
ဖြူဖြူကျော်သိန်းအနေနဲ့ တစ်ကိုယ်တော် Mini Album တစ်ခွေကို လာမယ့် ၂ဝ၁၈မှာ ဖြန့်ချိသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ”တစ်ကိုယ်တော့် Mini Album ထဲမှာ သီချင်းကတော့ ခြောက်ပုဒ်ပါမယ်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တဲမှာ ထွက်နိုင်အောင်လုပ်နေပါတယ်။ ထွက်ခါနီးရင်တော့ ထပ်ပြောပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မထွက်သေးဘဲပြောလိုက်ရင် ပရိသတ်တွေလည်း ရိုးသွားမှာစိုးလို့ပါ”လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ဖြူဖြူဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းတွေထဲက ပရိသတ်နဲ့ရင်းနှီးမှုရှိအောင် ကြိုးစားရမယ့်သီချင်းလေးတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
”ဖြူဖြူအဆိုတော် သက်တမ်း ၁၄ နှစ်အတွင်းမှာ သီချင်း ပေါင်း ပုဒ်ရေ ၁၅ဝ ကျော်ထဲမှာမှ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းက ၆ဝ လောက် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအပုဒ် ၆ဝ စလုံးကို ပရိသတ်ကမသိသေးပါဘူး။ သီချင်းတွေကတော့ ပေါက်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ Show ပွဲတွေမှာမဆိုဖြစ်ဘူး။ ဘာကြောင့် အဲ့ဒီသီချင်းကိုမဆိုတာလဲ လို့ပြောနေတဲ့ သီချင်းတော်တော်များများလည်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီသီချင်းတွေကိုလည်း ရင်းနှီးမှုရအောင် ပွဲတွေမှာလည်း ဆိုဖို့ရှိမယ်။ ကိုယ့်သီချင်းတွေအများကြီးထွက်ထားပြီးတော့ ပြန် မဆိုဖြစ်တော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ သီချင်းတွေကအဆက်ပြတ်သွားတယ်။ နောက်ပိုင်းသီချင်းအသစ်တွေအများကြီး ဆက်ထုတ်ဖြစ် နေရင် ပရိသတ်တွေလိုက်လို့ မမီမှာစိုးလို့ အဲ့ဒီသီချင်းတွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့လည်း အစီအစဉ်ရှိပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
လတ်တလောထွက်ရှိလာတော့မည့်(လှိုင်း) တေးသံသွင်း နှစ် ၅ဝ အထိမ်းအမှတ်အခွေမှာလည်း ဖြူဖြူကျော်သိန်းကပါဝင် သီဆိုထားပါတယ်။ ”အခုကတော့ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်မှာထွက်မဲ့ (လှိုင်း)တေး သံသွင်း နှစ် ၅ဝ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်နဲ့ ဦးခင်မောင်တိုးရဲ့ သီချင်း ဟောင်းတွေကို ပြန်လည်သီဆိုရာမှာလည်း ပါဝင်သီဆိုထားပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြားအမှတ်တရအဖြစ် ဂန္ထဝင်တေးသံရှင်ကြီး သီချင်းကို ပြန်ဆိုရတဲ့အပြင် ဂန္ထဝင်တယောပညာရှင်ကြီး ဘဘဦးတင်ရီက လည်း တယောဝင်ထိုးပေးထားပါတယ်။ သီချင်းကို ကိုယ်လည်း အရမ်းကြိုက်တယ်။ အခုလိုပြန်ဆိုရတယ်ဆိုတော့ အရမ်းလည်း ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်”လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
''သရုပ်ဆောင်သစ်တွေ၊ ဒါရိုက်တာသစ်တွေကို ပရိသတ်က လက်ခံလာခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ကို အားဖြစ်စေပ?
သမီးအတွက် အကြမ်းဖက် သမားများကို ကလဲ့စားချေမည့် တိုင်းတစ်ပါးသား The Foreigner ရုပ်ရှင်
‘သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ အခွင့်အရေးတွေ မရတော့ စိတ်ဓာတ်ကျသွားမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိုးရိမ်လို့
ကျိုင်းတုံမြို့နယ်တွင် စိတ်ကြွ ရူးသွပ်ဆေးပြားများ ဖမ်းမိ